यो वर्षको साउन महिनामा ५ सय ५८ वर्षपछिकै अद्भुत संयोग, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! – Sanchar Patrika
यो वर्षको साउन महिनामा ५ सय ५८ वर्षपछिकै अद्भुत संयोग, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल !
July 13, 2020 1133
काठमाडौं । नेपाली पञ्चाङ्गअनुसार साउन चौथो महिना हो । संस्कृतको श्रावण महिना अपभ्रंश भएर नेपालीमा साउन भएको हो । शास्त्रमा साउनलाई मासोत्तम मास अर्थात् सबैभन्दा उत्तम महिना भनिएको पाइन्छ । साउनको सुरुको दिन अर्थात् संक्रान्तिलाई विशेष महत्व दिइएको पाइन्छ किनभने यसै दिनदेखि सूर्य दक्षिणायन हुन्छ र दिन छोटा अनि रात लामा हुन थाल्छन् जुन क्रम माघेसंक्रान्तिसम्म रहन्छ ।
ज्योतिष विज्ञानअनुसार साउन अर्थात् श्रावण महिनाको पूणिर्माका दिन आकाशमा श्रवण नक्षत्रको योग निर्माण हुन्छ । त्यसैले यो महिनाको नाम श्रावण रहेको हो । साउन महिनालाई पवित्र महिनाका रूपमा लिने सनातन परम्परा छ । हरिशयनी अर्थात् आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि हरिबोधिनी अर्थात् कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्मको चार महिने अवधिलाई चतुर्मास भनिन्छ ।
त्यसैले श्रावण अर्थात् साउन महिनालाई पवित्र मानिएको हो । यसलाई आदिगुरु भगवान् शिवको प्रिय महिना पनि मानिन्छ । श्रवण नक्षत्र तथा सोमवारलाई भगवान् शिवको प्रिय महिना मानिन्छ । त्यसैले यो महिनामा शिवलाई खुसी पार्न विशेष धार्मिक अनुष्ठान एवं रुद्राभिषेकका साथै सोमवारका दिन व्रत बस्ने गरिन्छ ।
साउने संक्रान्तिका दिनदेखि सूर्य मिथुन राशि छोडेर कर्कट राशिमा प्रवेश गर्छन् । नेपालको ग्रामीण भेगमा संक्रान्तिका दिन लुतो फाल्ने परम्परा छ । सनातन धर्मावलम्बीहरूले साउन महिनाभर माछा९मासु, लसुन, प्याज आदि तामसी भोजन बार्ने चलन छ ।
४ ग्रहको ब’क्र योगले तपाईको राशिमा कस्तो प्रभाव पर्ला रु
मेष स् श्रावणको महिनामा मेष राशि भएकाहरुको साहस र पराक्रम बढ्नेछ । सम्पर्क र सामाजिकता राम्रो हुनछ । घर परिवारमा सुख शान्ती र सहजता हुनेछ । भवन, वाहनको अभिलाषा बढ्नेछ । कार्यक्षेत्र सँग सम्बन्धित महत्वूर्ण कामम पूरा हुनेछन् ।
वृष स् वृष राशिका लागि पनि श्रावण महिना राम्रो हुनेछ । यो पटक चार वटा सफलता तर्फ वृष राशि भएकाहरु उन्मुख हुनेछन् ।
मिथुन स् श्रावण महिना केही नयाँ उपलव्धि आर्जित गर्न सहायक हुनेछ । स्वास्थ्यलाई भने ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । नियमअनुशासन अपनाउँदा फाइदा पुग्छ । सक्रियताको लाभ हुनेछ । प्रशासनिक काममा सपफता मिल्छ । बोल्नु भन्दा धेरै काम गरेर देखाउनुहोस् । महिनाको शुरुवातमा मेहनतको बलमा अअपेक्षित सफलता हात पर्ने छ भने उत्तरार्धमा रहन सहन र खानपानमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यो महिनामा तपाईको निर्णय क्षमता बढ्नेछ ।
कर्कट स् यो राशि भएकाहरुलाई श्रावण महिना उत्तरोत्तर शुभकारक छ । मेहनत लगन तथा दूरदर्शी लागानीले अपेक्षित परिणाम दिनेछ । यी राशि भएकाले यो महिना सक्रियता बढाउनेछन् भने अनुशासनमा जोड दिनेछन् । महिनाको सुरुवातमा खर्च वृद्धि हुनेछ । चाप्लुसी गर्नेहरुबाट सर्तक हनु होला । उत्तरार्धमा आर्थिक रुपमा सफता प्राप्त हुनेछ । क्रो’धलाई नियन्त्रण गर्नुभएन भने समस्या देखिने योग छ ।
सिंह स् श्रावण महिनामा तपाइएको आर्थिक गतिविधी बढ्नेछ । क्षमता प्रदर्शनको अवसर प्राप्त हुने छ । साथीहरुको साथले काम बन्ने छ । प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ बन्ने छ । पूर्वार्धमा करियर, जागिर र कारोबारमा तपाईले विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भने लाभको प्रतिफल उच्च हुनेछ ।महिनाको अन्तिमा स्वयं र नजिकका लागि तपाईले समय निकाल्नुहुनेछ ।
कन्या स् श्रावणमा कार्यक्षेत्रमा नयाँ संभावनालाई बल दिने सम्भावना छ । पदोन्नती एवं सकारात्मक परिवर्तन सम्भव देखिएको छ ।
तुला स् धर्म मनोरञ्जनमा रुची बढ्ननेछन् । सानो प्रयासमा पनि काम बन्ने छ । अवसरहरु आउनेछन् तर त्यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ । यो महिनामा थप अनुशासन र समयको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
वृश्चिक स् परीक्षामा सफलता प्राप्त हुने योग छ । अनुशासन तथा आत्मनियन्त्रणका साथ अघि बढ्न जरुरी छ । यो समयमा तपाईले मुस्किल लाग्ने कामलाई पनि सहजता पाउनुहुनुनेछ । तर विनम्रता र काममा निरन्तरतामा कमी आउनेछ त्यसलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
धनु स् यो महिना घरपरिवारसँग सामिप्यता बढ्नेछ । साथीको भनाइलाई महत्व दिनुपर्ने देखिएको छ । दाम्पत्यमा पारदर्शिता तथा प्रेम बढ्नेछ । कुनै पनि कामका लागि राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ । पूर्वार्धमा करियर कारोबारमा व्यस्तताले सम्झौताका लागि प्रेरित गर्नेछ । उत्तरार्धमा गरिमा, गोपनीयतालाई ध्यान राख्नुपर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य प्रभावित बन्न सक्छ ।
मकर स् निजी जीवनमा सुख बढ्नेछ । संघर्षमा सफलता मिल्नेछ । नयाँ सम्भावनालाई बल दिनेछ । व्यक्तिगत समस्या समाधान हुन । तपाईलाई लाभ हुनेछ । मेहनत था लगनबाट स्वयंका लागि उचित अवसर निर्माण गर्न सक्छ ।
कुम्भ स् सम्बन्धमा मधुरता प्राप्त हुनेछ । यो महिना साहस सक्रियता थत सटीकता बढाउने छ । परीक्षामा सफलता, साथीहरुको सहयोग मिल्नेछ । भ्रमण र मनोरञ्जनको योछ । काम व्यवसायमा केही मात्रामा सफता हुनेछ । पूर्वार्धमा सन्तानको शुभ समाचार आउनेछ । स्वास्थ्य भने केही प्रतिकुल हुनेछ ।
मीन स् शिक्षा प्रेम तथा सन्तान पक्ष राम्रो रहेको छ । तर घरेलु समस्यामा बादविवादमा वा बहसमा उत्रनुबाट बच्नुहोस् । अप्त्याशित असहजताबाट बच्नका लागि अनुशासन मा जोड दिन अआवश्यक छ । पूर्वार्धमा जिद्दी र पूर्वाग्रहबाट बच्नुहोस् । उत्तरार्धमा व्यक्तिगत प्रदर्शनमा सुधार आउनेछ । दाम्पत्य जीवन शुखमय हुनेछ ।
Prevजब आकासवाट पानी होइन माछाको वर्षा हुन थाल्यो, भयो यस्तो अचम्म [भिडियो हेर्नुस्]
Nextबृद्धाश्रममा सन्तान आउने दिन कुर्दाकुर्दै अस्ताइन ६८ वर्षीया चेतकुमारी बुढाथोकी
यतीले थाल्यो सिमरामा नियमित उडान, २ हजार मात्र भाडा
एसरि रोक्नु शी*घ्र वी*र्य स्ख*लनको समस्या
सुशान्तको अन्तिम फिल्मको ट्रेलरले रेकर्ड राख्दै रुवायो सबैलाई (हेर्नुहोस् )